यो पेय चालीस भन्दा सबै मानिसहरूलाई पक्कै परिचित छ। सोभियत युवा 60s लागि यसको स्वाद र साँच्चै धार्मिक महत्व, 70s, 80s, शायद, र '90 को दशक दन्त्यकथा को शुरुवात। यसलाई कविता बनेको थियो र गीतहरू लेखिएका थिए (उदाहरणका लागि, "पोर्ट लीटर" वा बुझाउँछ जो "पहरादारसँगै Sergeev," "आमा - अराजकता, बाबाले - पोर्ट एक गिलास")। हामी "777" (पोर्ट) दृढ पूर्व सोभियत संघ को पुस्ताका जीवनमा प्रवेश भनेर भन्न सकिन्छ।
यसलाई अब, को पाठ्यक्रम, सबैलाई थाह छ पोर्ट कि - यो विशेष पोर्चुगिज सुदृढ रक्सी, उत्पादन को एक धेरै सीमित क्षेत्र छ जो। व्यवस्था गरेर, यो केवल यस देशमा उत्पादित गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि उत्तर पूर्व (को के साँच्चै पोर्ट हुनुपर्छ, हामी पछि व्याख्या हुनेछ)। तर सोभियत संघ मा पनि गरे, र पनि त्यो बाटो भनिन्थ्यो। मायालु मात्र भनिन्छ छैन यो छ रूपमा - "तीन अक्षहरूमा" (किनभने अक्षहरूमा संग सेभेन्स को समानता को), "portveshok" "777" (पोर्ट)। र हरेक आत्म-आदर "सही" केटा बस कम्तिमा एक जोडी पटक यो औषधि साथीहरूसँग पेय यार्ड अवधारणाहरु मा थियो।
Cheapness, उपलब्धता, गढ
यी तीन विशेषताहरु, तिनीहरूले आज भन्न, "गरे लोकप्रिय" पेय "777" (पोर्ट)। यो कुरा अर्थव्यवस्था र कुल खाद्य घाटा (मादक पेय सहित) सोभियत winemakers को मार्गदर्शन विनियमन समयमा संभावना intuitively अंदाजा कि, र सुनिश्चित छ: सस्तो-उपलब्ध-तंग। पनि फल विकल्प र "बिस्कुट" (खट्टे प्रदान गर्दछ: रक्सी, पोर्ट "777" बाहेक वस्तुतः दाखमद्य र आत्माको विभाग मा समतल कुनै प्रतियोगिता थियो ड्राई रक्सी)। निस्सन्देह, सजिलो, र थप स्वादिष्ट, इमानदार हुन, यो पोर्ट वाइन, सुक्खा रक्सी को दुई वा तीन बोतल लिन भन्दा, (किनभने शैम्पेन अन्तर्गत देखि विशेष बोतल, उहाँले फ्याँकिएको छ, जो मा को) को "आगो निभाउने" भनिएको छ जो एक पेय थियो। त्यसैले, "777" (पोर्ट), र सायद यस्तो हिट भयो,।
पी को सोभियत संघ उत्पादन। "777" - साधारण रक्सी को एक प्रसिद्ध ट्रेड मार्क अनियन्त्रित छ (एक परिणाम रूपमा - कम लागत)। सामान्यतया, यो एक अन्यसरोगेट तरिका प्राप्त छ।
Potency - 19% सम्म (साधारण द्वारा इथाइल अल्कोहल), चीनी - 10%। अक्सर सेतो, तर जारी र पोर्ट रक्सी रातो र गुलाबी।
केही थप तथ्य
तथ्याङ्क अनुसार, सोभियत संघ समयमा प्रत्येक वर्ष (दाखमद्य उत्पादन बाँकी मात्र 150 decalitres को हिसाब गर्न) 200 भन्दा बढी पेय दल उत्पादन। यहाँ सोभियत मान्छे यो प्रेम कसरी!
धनी मान्छे पुराना पोर्ट रक्सी "Massandra", जो धेरै अधिक महंगा खर्च र एकदम सभ्य स्वाद थियो किन्न सक्छन्।
एक परंपरागत "तीन सात" लागत केवल एक रूबल! यो जनसंख्याको लगभग सबै खण्डहरूमा लागि अपिल गर्ने पेय गरे। यस पीठ मा एक गेट, बगैचा,: सामान्यतया "hatchets" मा तीन लिइरहेको र कहीं पनि "उपयुक्त" ठाउँमा पिए। रोमान्स, र थप!
तरिका, केही पोर्ट वाइन यस्तो उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान रूपमा बासिन्दाहरू (मुस्लिम) को बहुमत पिउन जहाँ छैन गणराज्यहरु, उत्पादन।
कसरी सोभियत संघ मा पिउन गर्नुभयो
संघ को समयमा तथाकथित पोर्ट एकदम एक मूल बाटो बनाए। यो प्रविधिको विकास र रूसी वैज्ञानिकहरू र winemakers तथाकथित "portveynizatsiya" द्वारा पेटेंट थियो। तल लाइन क्रममा रक्सी एकदम लामो समय (तीन तीस दिन) को लागि आफ्नो परिपक्वता, 50-70 डिग्री को एक तापमान गर्न गरम बढाउने भन्ने थियो। यस्तो अवस्थामा, रक्सी सामाग्री अक्सिजन संग सम्पर्क भएको थियो, विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया आयो। पछि इच्छित डिग्री (सामान्यतया 17-19) भन्दा इथाइल गर्न निश्चित थियो रक्सी रक्सी।
तर यो सबै मात्र राम्रो पोर्ट वाइन, पुराना थियो। साधारण, अक्सर मिश्रित अङ्गुरको रस र रक्सी, रंजक र थप चीनी लागि जाँदा। सबै भन्दा राम्रो मा, मिश्रण sawdust र shavings संग ट्यांक केही समयको लागि राखिएको थियो। पक्कै छैन पोर्ट रक्सी र रक्सी र सामान्यतया "टेङ्गल-खुट्टा" असम्भव भनिन्थ्यो भन्ने कुरा। नियम, यो singed स्वाद चीनी संग, कहिलेकाहीं त्यहाँ जाम र सुकेको फल टिप्पणीहरू थिए दिनुभयो। र, को पाठ्यक्रम, रक्सी को असली स्वाद, यो रक्सी मा जो हुनु हुँदैन! त्यसैले एक पोर्ट "777" के गठन: डिग्री - आत्महत्या, स्वाद र रंग - यस्तै। जिगर को तीन अक्षहरूमा। अर्को बिहान - एक गम्भीर hangover प्रत्याभूति। तर हामी त्यो ती दिनमा मनपराएका केही कारणले साना, वा के गराउँछ, तर धेरै थिए कि। शायद बस सभ्य र किफायती वैकल्पिक छैन। सकारात्मक सन्दर्भमा केही शब्दहरू हुनत, यो यस प्रकारको को क्राइमन पेय पदार्थ बारेमा भने हुनुपर्छ।
पोर्ट रक्सी "Massandra"
"दक्षिण कोस्ट" रातो। चीनी - 11%, गढ - 18%। यो Crimea मा हुर्केका रातो अङ्गुर देखि बनेको छ। माणिक को रंग, फल टिप्पणीहरू संग स्वाद। सामान्यतया यो तीन वर्ष आयोजित। उहाँले धेरै पदक सम्मानित गरिएको थियो। स्वाद एकदम सभ्य छ। मात्र drawback - इथाइल अल्कोहल सुरक्षित छैन अंगूर।
"Livadia" पोर्ट। वाइन तीन वर्ष उमेर बढन छ। एक सानो कम चीनी (8%)। यो क्याबरन Sauvignon को अङ्गुर देखि बनेको छ। पनि धेरै पदक संग पुरस्कृत गरियो।
त्यसैले वैकल्पिक यो असाध्यै लागत, साँचो वास्तवमा थियो।
खैर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुसार, मदिरा Massandra मदिरा जस्तै छैनन् सुदृढ। बरु, यो ब्रान्डी वा आउटडोर छ। तर युरोप बाट क्राइमन पेय कमसल छैन केही, हाम्रो दृश्य, भाइहरूको स्वाद।
यो शब्द स्पष्ट यसको मूल संकेत जो "पोर्टो देखि रक्सी", रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। वाइन पोर्चुगल नदी मा डोउरो उपत्यकाका उत्पादन। प्रविधिलाई दाखमद्य अवशेष चीनी nedobrodivshego संरक्षण गर्न अवरोधको Mash किण्वन छ। पोर्ट एक अद्वितीय स्वाद छ र रंग रक्सी ओक Casks थप ढिलाइ कारण। यो रक्सी सामग्री - अप 21% गर्न।
यस प्रकारको को सेतो वाइन सुक्खा र अर्ध-सुक्खा र semisweet छन्। रातो - अर्द्ध-सुक्खा, अर्ध-मीठा र मीठो। चीनी सामग्री विभिन्न देखि तीन सोह्र प्रतिशत। अंगूर ब्रांडीको distillate प्रयोग संलग्न। वर्तमान पोर्चुगिज रक्सी ओक व्यारेल र थप बोतल मा बर्ष। यो एक विशिष्ट fruity र अलिकति tart स्वाद छ, रक्सी महसुस छैन।
कसरी पोर्ट प्रयोग गर्न
राम्रो पोर्ट रक्सी विशेष पातलो-पर्खालले घेरिएको चश्मा, अक्सर व्यापक Tulip आकारको (फूल को संरक्षण दीर्घकालीन लागि) बाट पिएको छ। 50-70 एमएल पोख्नुहोस्। सेतो cooled, रातो पेय कोठा तापमान। पनीर रूपमा नाश्ता अक्सर प्रयोग गरिन्छ। पोर्ट मिठाईहरू र फल राम्रोसँग जान्छ। चाखलाग्दो कुरा, जब राजाको तालिका निकोलस ll पोर्ट को सूप पछि तुरुन्तै सेवा थियो।
त्यसैले वास्तवमा पोर्ट पिउन एक कला हुन बाहिर जान्छ। तर हामी समाजवाद को युग मा कि थाहा थिएन, र पोर्ट एकदम नै गरिएको छैन। र यो एक खाजा प्रक्रिया पनीर "मैत्री", धूम्रपान capelin र बीउ छ मानिन्छ थियो।
ग्रीक वोदका: नाम, प्रजाति, फोटो
"Koskenkorva" - उत्कृष्ट गुणस्तर को वोदका
"स्टोन सिंह" - सबै को लागि ब्रांडीको
साइडर - घर मा स्याउ रक्सी
प्रत्यक्ष गोल्ड - बियर "Stary Melnik"
एक उम्दा भोजन कसरी खाना पकाउनु। सल्लाह र सारा महाराज को बुद्धि
'नेपोलियन' - कस्टर्ड संग केक
कसरी चिकन आकर्षित गर्न? कार्यशाला
वर्णन, स्थापना: शिकार पानी र जमीनमा बस्ने जनावर र ब्याजर लागि जाल पास
संयुक्त ताप बयलर (काठ + बिजुली) विशेषताहरु र विशेषताहरु
चिया सेवा - गृह पिउने चिया आधार